नजराजका बुवा भन्छन्, ‘युवतीका ठूलो बुवाले ‘‘ठकुरीको सम्धी हुने सपना नदेख भनेर हप्काए’ (भिडियो)
June 2, 2020 1185
रुकुम जाजरकोट घटनाा ज्या’न गुमाए’का नवराज विकका वुवा आमा यतिवेला जवान छोराको किरिया बसेका छन् । उनीह’रुले छोरा त्यसरी जेठ १० गते वुहारी लिन जान लागेको भने थाहा नभए’को बताएका छन् ।
अभिभावकलाई नभनेर आफ्ना छोरा वुहारी लिन गएको भनेर भनिएको भएपनि आफुले त्यस्तो नला’गेको बताएका छन् । उनले मिडियामा आए’जस्तो आफ्नो छोरा वुहारी लिन होइन काफल खान भन्दै गएको बताएका छन् ।
अभिभावकलाई नै नभनेर आफ्नो छोरा वुहारी लिन नजाने उनको भनाई छ । उनी वुहारी लि’न गएको भए हामीलाई भनेर जान्थ्यो, साथीसंग के कुरा गर्यो त्यो थाहा भएन तर मेरो छोरा बु’हारी लिन होइन काफल खान भन्दै साथीसंगै ग’एका हुन् ।
नभएको कुरा मैले भन्न मिल्दैन, उनले भने त्यो शनिवारको दिन थियो । भेरीमा नुहाउने, माछा मा र्ने र काफल खाएर घुमघाम गर्न भनेर गएको भनेर मैले बुझेको छु । घा’इेत साथीले पनि त त्यही भनेका छन् ।
नवराजको वुवाले पनि युवती आ’फ्नो घरमा ५ दिन बसेर गएको बताएका छन् । उनले त्यतीबेला आफुले पनि विवाहको कुरा अहिले नगर भनेर सम्झाएको बताएका छन् । युवतीलाई ति मी पनि एसइइको तयारी गर, मेरो छोरा पनि प्रहरीको तयारी गरेको छ ।
दुवै जनाले आफ्नो भविष्य बनाउ अनि उमेर पुगेपछि विवाह गरिदिउँला भनेर भनेको बताएका छन् । उनले जातका कार’णले तिमीहरुको वि’वाहको विषयमा समस्या हुन सक्छ पछि परिवारका सदस्यले पनि अनुमति दिए भने केही वर्ष पछि विवाह गरौला अहिले विवाह गर्न मिल्दैन भनेर आफुले युव’तीलाई पठाएको बताए ।
उनले शुष्मा आफ्नो घरमा आएको बेलामा आफ्नो छोरीसंग बस्न दिएको बताए । नवराजको कोठामा गएको बेलामा आफुले केटाको कोठामा बस्न नदिएको र छोरीसंग बस्न पठा’एको बताए । सुरुको तीन दिन बस्दा मैले वास्ता गरिन ।
छोरीसंग बसेको होला भन्ने ठानेको थिए । तर पछि राति मैले युवतीलाई नवराजको कोठामा देखेपछि श्रीमती’लाई भनेर युवतीलाई छोरीको कोठामा पठाएको उनले बताएका छन् ।
आफ्नो छोरा भने युवतीको कोठामा गएको नगएको विषयमा भने आफुलाई थाहा नभ’एको बुवाले बताएका छन् । आफ्नो छोरा युवतीको गाउँमा जाँदा पहिले पनि नवराजलाई समा’तेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको आफुले थाहा पाएपछि आफु त्यो
यो घट’ना हुनुअघि युवतीका ठूलो वुवाले नवराजको बुवालाई धेरै पटक सम्झाएको पनि नव’राजको बुवाले स्वी’कार गरेका छन् । दुई पटक फोन गरेर छोरालाइ तह लगाउनु भनेर सम्झाएको र एक पटक भेटेरै सम्झाएको पनि नवराजको बुवाले बताएका छन् । ‘म उनकै पसलको बाटो हिडेको थिए, इन्द्र मल्ल (युवतीको ठूलो बुवा) ले मलाई बो’लाएर तिम्रो छोरालाई सम्झाउ, थुप्रै केटा लिएर चौरजहारी गएको छ रे ।’
‘त्यता’का केटा पनि अलि बदमास छन् भोली केही होला भनेर भने, अनि मैले पनि तिम्रो छोरीलाई पनि सम्झाउ ‘भनेर जवाफ दिएँ उनले भनेका छन् । रुकुमवाट १९ जना युवक चौरज’हारी आउँदैछन् भनेर उनले नै खबर गरेको हुनसक्ने नवराजको बुवाको आशंका छ ।
नवराज’को वुवाले फेसवुकमा आफ्नो छोरा र युवती’कोसंगै फोटो देखेपछि इन्द्र मल्ललाई लगेर देखाएको र त्यतीबेला तिमी के ठकुरीको सम्धी बन्ने इच्छा छ ? भनेर प्रश्न गरेको सम्झन्छन् ।
उनले भन्नुको मतलव तिमीहरु दलित हौ, ठकुरीको छोरी न’ताक भन्न खोजे’को त हो, उनले भने । उनले दुई जनाको ७ वटा फोटो संगै देखेपछि त्यो फोटो देखेपछि छोरीलाई सम्झाउनु भनेर इन्द्र मल्ललाई भनेको पनि उनले बताए । – भिडियो हेर्नुहोस…
Prevतपाईंको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्….
Nextभारत छाडेर मनिषा कोइराला आजै परिवारसहित नेपाल आईन् , हेर्नुहोस्…
लकडाउन’मा पनि सांसद’ले छाेडेनन् ‘सवारी भत्ता’
ऋणमा डुबे धुर्मुस, सहयोग जुटाउन मेची-महाकाली अभियानको लागि निस्किए….
क्वारेन्टाइनमा बस्दा माया बसेपछि २ सन्तान र श्रीमान छोडेर क्वारेन्टाइनबाटै भागिन् अर्कोसँग (भिडियोसहित)